War Deg Deg: Hogaamiyeyaasha caalamka oo ka hadley weerarada ka dhacay Norway – SBC
War Deg Deg: Hogaamiyeyaasha caalamka oo ka hadley weerarada ka dhacay Norway
Hogaamiyeyaasha caalamka ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii toogashada & qaraxii ka dhacay wadanka Norway, iyagoo tibaaxay inay garab taagan yihiin dawlada & shacabka Norway.
Prime Minister Stephen Harper wuxuu yiri “Waan ka naxay weerarkan waana mid naxdin leh oo waliba murugo ah, waxaan tacsi u diraynaa ehelka kuwa naftooda ku waayey falalkan”.
Madaxweynaha President Nicolas Sarkozy wuxuu ku tilmamaay weerarada dhimashada ee Oslo kuwa qaracan ah oo ah rabsho aan la aqbali karin, xiligan oo uu ku tilmaamay xili aan la ilaawi karin, wuxuu sheegay in dhamaan dadka Faransiisku inay u tacsiyeynayaan dhamaan dakda reer Norway.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu yiri “Dhacdooyinka ka dhacay Oslo waxay ina xusuusinayaan in aduunyada ay ku leedahay door sidii loo joojin lahaa ficilada argagixisada, wuxuu hadalkan jeediyey isagoo aqalka cad kula lahaa kulan Ra’isalwasaaraha New Zealand John Key oo booqanaya Mareykanka.
Obama oo dalka Norway lagu gudoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Prize-ka wuxuu sheegay in uu shakhsiyadan tacsi u dirayo dadka wadanka Norway.
Madaxweynaha wadanka Pakistan Asif Ali Zardari wuxuu sheegay in uu aad u cambaareynayo weerarkaasi, isagoo sheegay in wadankiisa Pakistan uu safka hore uga jiro la dagaalanka waxa loogu yeero aragagxisada.
Ra’isalwasaraha Britain David Cameron wuxuu yirin “weeraradani waxay yihiin xusuusin taagan oo ah in dhamaanteen aynu wajahayno argagixisada” wuxuu ku yaboohay in Britain ay ka qaadan doonto baaritaanka weeraradaasi.
Gaashaanbuurta NATO oo ay Norway xubin buuxda ka tahay si adag ayey weerarkaasi u cambaareeyeen.
Xoghayaha guud ee Nato Anders Fogh Rasmussen ayaa weeraradaasi uggu yeeray “Fal gumaad ah”.
Madaxweynaha golaha midowga Yurub Jose Manuel Barroso ayaa ku sifeeyey weeraradaasi naxdin lama filaan ah wuxuu sheegay inaan laga fileyn weeraro caynkaasi ah “Norway oo ah hoy nabadeed & nabad dhaliye dibada”.